Izixazululo Zasekhaya Zokwelapha I-Canine Conjunctivitis | Izinja Umhlaba
Amakhambi asekhaya okwelapha i-canine conjunctivitis
I-Conjunctivitis yisifo esidinga ukwelashwa ukuze silapheke. Ngaphezu kwalokho, kufanele kubhekwe ukuthi kungasakazeka kalula uma kungathathwa uchungechunge lwezinyathelo zokuhlanzeka eziyisisekelo, njengokuhlanza izandla ngaphambi nangemva kokuthinta isilwane. Noma kunjalo, ukugwema izinkinga singenza ezinye izinto ezizosiza uboya bethu ukuba buphole ngokushesha okukhulu.
Ngakho-ke, ngezansi sizokutshela iziphi izixazululo eziphumelela kakhulu ekhaya zokwelapha i-canine conjunctivitis.
1 Amakhambi asetshenziswa kakhulu emakhaya
1.1 Hlanza amehlo akhe nge-chamomile
1.2 Gqoka izingcindezi ezishisayo / ezibandayo
1.3 Cabanga ukubeka ikhola lika-Elizabethan kuye
1.4 Mnike ukudla okusezingeni
1.5 Sebenzisa i-Physiological Serum
1.6 Amaconsi e-antiallergic (Uma kwenzeka ukungezwani komzimba)
2 Kuyini i-conjunctivitis ezinjeni?
3 I-conjunctivitis yelashwa kanjani ezinjeni?
4 Kuthatha isikhathi esingakanani?
5 Isakazeka kanjani?
Amakhambi asetshenziswa kakhulu emakhaya
Hlanza amehlo akhe nge-chamomile
I-Chamomile inezindawo zokulwa namagciwane ezisetshenziswe amakhulu eminyaka ukwelapha izifo zamehlo. Kulezi zinsuku, kusengenye yezindlela zokwelapha zasekhaya ezinhle kakhulu laphaya, futhi enye yezinto ezilula ukuzilungiselela.
Kufanele nje wenze ukumnika kwe-chamomile (ungakwenza ngezimvilophu ezithengiswa ezitolo ezinkulu), vumela ukupholisa bese uthambisa i-gauze ehlanzekile bese uhlanza iso. Bese, ngenye i-gauze, phinda okufanayo nenye.
Gqoka izingcindezi ezishisayo / ezibandayo
Ukushintsha ukucindezela kwamanzi afudumele nabandayo kuzosiza ukukhulula izimpawu ze-conjunctivitis enjeni yakho. Ngenkathi amakhaza ezonciphisa ubomvu nokuvuvukala, ukushisa kuzokhipha ukucasuka. Vele, ukuze kusebenze kufanele ubashiye imizuzu emihlanu.
Cabanga ukubeka ikhola lika-Elizabethan kuye
Uma uboya bakho bubonakala bucasukile futhi bungayeki ukunwaya iso elithintekile, kungadingeka ukubeka ikhola lika-Elizabethan kuye. Uzothola lolu hlobo lwemigexo oludayiswa emitholampilo yezilwane, kodwa futhi nasezitolo zemikhiqizo yezilwane nasezitolo eziku-inthanethi.
Mnike ukudla okusezingeni
Yithina esidlayo. Ukuze umzimba ukwazi ukulwa nama-microorganisms ayithintayo, kufanele uthole zonke izakhamzimba ozidingayo. Ngakho-ke, kunconywa kakhulu ukuthi unikeze ukudla okunoboya okungenakho okusanhlamvu noma okwenziwe ngemikhiqizo.
Sebenzisa i-Physiological Serum
Uma uthinta udokotela wezilwane ngokukhathazeka kokuthi inja yakho inale nkinga emehlweni ayo, impela lokhu kuzokunikeza isisombululo sikasawoti, ukuze uhlanze leyo ndawo yenja ethintekayo.
Lokhu kuzokwenza inja yethu izizwe ingakhululekile kangako ebangelwa yilesi simo, esivame ukumelwa ngendlela yama-lagañas okumele akhishwe. Uzothola usawoti womzimba kuwo wonke amakhemisi futhi ungenza izinhlelo eziningi ngangokunokwenzeka. Kufanele ubeke okuncane kwalesi sixazululo ku-gauze bese ubhucunga indawo ethintekile ngayo, ngokunakekela okuthile.
Amaconsi e-antiallergic (Uma kwenzeka ukungezwani komzimba)
Akwenzeki kuzo zonke izimo, kepha imvamisa kwenzeka lokho ezinye izinja zithola i-conjunctivitis kusuka ekungezwani komzimba. Lokhu kungenzeka ngenxa yokungena kolunye uhlobo lomzimba wangaphandle, kepha futhi ngenxa yokuxabana nento ebangela ukungezwani komzimba, phakathi kwamanye amathuba amaningi.
Uchwepheshe uzosincoma ukuthi sisebenzise lolu ketshezi oluzosho isisombululo senja yethu, ngoba inezinto ezilwa nokuvuvukala ezidingekayo kulezi zimo. Kumele ubeke amathonsi ambalwa esweni elithintekile. Okufanele ukubheke ukuthi uma leli iso futhi linokulimala okuthile kulokhu, kufanele ubone uchwepheshe, ngoba lokhu ngeke kusize kangako.
Esinye sezitshalo esinezinto zokwelapha maqondana ne-conjunctivitis ezinjeni zethu esizithandayo yi-thyme. Lesi sitshalo sinezici ezibalulekile ezilwa nokuvuvukala kanye nezibulala-magciwane, ngakho-ke kuhle ukwelashwa kwanoma yiluphi uhlobo lwe-conjunctivitis, kungaba okuthelelanayo noma okweqile.
Kufanele wenze ukumnika, bese uyihluza bese uyivumela ipholile ize ifudumale. Kufanele isetshenziswe uma isondela emakhazeni, ngaphandle kokufinyelela esimweni sokuvutshelwa, ngoba lokho kuletha amabhaktheriya amaningi. Nge-gauze efakwe kulokhu ukumnika uzohlanza iso elithintekile lesilwane sakho ngokubhucungwa ngokucophelela.
Ngendlela efanayo naleyo eyenzeka ngayo nge-thyme, i-oregano nayo isetshenziswa ngendlela efanayo, ngenqubo efanayo yokwenza ukumnika ngalokhu ukuthi kusetshenziswe esweni elithintekile lenja yakho, okusho ukwelashwa kwemvelo ngezakhiwo ezinenzuzo ukwelapha i-conjunctivitis.
Izici ezithandekayo ze-oregano zihlobene nezakhiwo zayo ezibulalayo njenge-anti-inflammatory ne-antibacterial, okwenza kubaluleke kakhulu ukwelapha izinhlobo ze-conjunctivitis ezihlobene nama-allergen agents noma ezibangelwa amagciwane noma isikhunta. Ingxenye yayo elwa nokuvuvukala izonciphisa kakhulu ukuvuvukala nokucasuka.
Elinye lamakhambi asekhaya angakusiza kakhulu ukuze isilwane sakho sithuthuke ukwenza ukumnika nge-calendula yemvelo, ngenani elikhulu lezakhiwo, phakathi kwayo kukhona i-anti-inflammatory, antibacterial, opholile kanye ne-antiseptic.
Enye yezinto ezihlukanisa i-calendula ezitshalweni ezibalwe ngenhla ukuthi kuyinikeza izindawo zokuphulukisa, okwenza kubaluleke kakhulu kulawo ma-conjunctivitis akhiqiza uhlobo oluthile lwesilonda esweni lesilwane. Kusebenza kakhulu kuwo wonke amacala we-conjunctivitis yebhaktheriya ezinjeni.
Onamandla ama-antibacterial and anti-inflammatory properties anayo i-fennel ikwenza kube elinye lamakhambi emvelo asekhaya asebenza ukubhekana nezimo ezahlukahlukene ze-canine conjunctivitis.
Isici esibalulekile fennel ukuthi inezinto ezithanda ukubomvu esweni lesilwane sethu ukuthi zinyamalale, ngaphezu kokuba ilungele kakhulu ukunciphisa amabhaktheriya, esimweni se-conjunctivitis yebhaktheriya.
Kuyini i-conjunctivitis ezinjeni?
Ngendlela efanayo nabantu abane-conjunctivitis, izinja nazo zihlushwa yilesi simo. Ngokuyinhloko ukuvuvukala, okwenzeka kulwelwesi lwe-conjunctival olubhekele ukumboza iso, kukhiqize ngasikhathi sinye ukuvuvukala kumajwabu amehlo okuzokhipha ukungaphatheki kahle kwenja yakho.
Le membrane inezici ze-viscosity esimweni sayo esivamile., ungqimba oluncane kakhulu futhi oluguquguqukayo, kepha lesi sici sokugcina sizolahleka ngesikhathi se-conjunctivitis, njengoba lesi sicubu sizoba bomvu, sikhiqize ngasikhathi sinye ukushisa, ukuvuvukala nokudabuka emehlweni enja yakho oyithandayo.
Njengoba nje le kuyinkinga ethinta abantu ngokujwayelekile, esimweni se-canine conjunctivitis futhi yisifo esingenzeka ezinjeni ezinesikhathi esithile. Yize kusikisela ukucasuka okukhulu kwezinja zethu, Lesi sifo sinenkathi yesikhathi emehlweni ezilwane zethu futhi kunzima kakhulu ukuthi lesi sifo sithinte ukuzibona kwezilwane zethu unomphela.
I-conjunctivitis yelashwa kanjani ezinjeni?
Noma yini eyenzekayo enjeni yakho nanoma yiluphi uhlobo lokucasulwa kweso okubonayo kuye, Njalo into yokuqala okufanele uyenze ukubonisana nodokotela wezilwane, ekunikeza uhlobo olufanele lokuxilongwa lwenkinga ethile yesilwane sakho.
Lokhu kusho ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo akufanele sizikhethele uhlobo lwezokwelapha, ngaphandle kokwazi ukuthi yini icala elithile le-conjunctivitis inja yethu ebhekene nayo.
Si ukuhlangana Kubangelwa isimo samehlo esisishilo, ngaphandle kwalokhu kube umphumela ohlangothini lwesinye isifo isifo inja engaba naso, ukwelashwa kusekelwe ikakhulukazi ekuhlanzweni kwamehlo ngokusebenzisa i-gauze oyinyumba ofakwe isixazululo esithile.
Ngesinye isikhathi, bezama ukusebenzisa izixazululo ezihlekisayo, kepha ukumunca isikhumba kunzima kakhulu, kanye nokusetshenziswa kwayo futhi lokhu kuhlobene nokuthi le ndawo intekenteke kakhulu.
Uma kwenzeka inja yakho yethule i-conjunctivitis kaninginingi ngaphambili, bese wenza sengathi lokhu ngeke kuphinde kwenzeke, ungasebenzisa izindlela ezahlukene zokuvikela, ungaluhlanza kanjani lolu hlobo emehlweni, kepha kaningi futhi ngaphandle kwalesi sifo, uvimbela inja ekusondeleni kumakhemikhali, usike izinwele eziseduze kwendawo yeso lenja futhi wenze izibuyekezo ngezikhathi ezithile kudokotela wezilwane.
Kuthatha isikhathi esingakanani?
I-conjunctivitis ezinjeni izohlala ngokuya ngobukhulu noma imbangela ebangele ukuvuvukala kwezicubu ezixhumene neso lesilwane sakho, imvamisa lesi yisifo esifushane.
Kuzoncika futhi nokuthi ngabe ukwelashwa okwenziwayo ukuze kuncishiswe kwanele yini. Lokhu kusho ukuthi inqobo nje uma ukuvuvukala kuyinkathazo yenja kungahle kuncike esenzweni esisheshayo esenziwa yithi.
Amacala ahlala isikhathi eside angalawa i-conjunctivitis yokucasuka, ezoxazululwa ezinsukwini ezimbalwa. Ngokuphambene nalokho, i-viral conjunctivitis yiyona evame ukuhlala isikhathi eside kakhulu, futhi inja ingathola izimpawu zayo cishe izinsuku eziyi-15.
I-bacterial conjunctivitis ivame ukuhlala phakathi kwezinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi futhi esimweni sabagulayo bokungezwani komzimba, ukuvuvukala okubangelwa umzimba wangaphandle kunganyamalala ezinsukwini ezimbalwa. Iqiniso lokuthi isilwane asisavezwa kule allergen sizokwenza lolu hlobo lwe-conjunctivitis luhlale kancane.
Uma ubucabanga ukuthi inja yakho ingaba nayo icala lokuhlangana Kungenxa yokuthi uhlole amehlo abo futhi uwabonile kancanyana icasukile, ibomvu, noma yomile.
Imvamisa kubonakala kahle ukuthi isilwane asizizwa silungile ngokubukeka, noma ungakubona lokho ube nohlobo oluthile lokukhishwa kwamanzi esweni, engashintsha ibe phuzi noma ibe luhlaza ezimweni eziqine kakhulu.
Ungambona futhi ezama ukukhuphula izinyawo zakhe zize zifike emehlweni akhe, ngokulunywa okuthile, futhi ingalahla nokukhanya, njengezimpawu zokungaphatheki kahle okungenzeka ukuthi kungenxa yecala le-conjunctivitis.
Lapho sibhekisela ku-conjunctivitis yokungezwani komzimba, sikhuluma ngohlobo lwe-conjunctivitis olungathathelani, kodwa kufanele yenzeke ngokunembile uma kukhona ukusabela okweqile noma ukuguguleka kwe-cornea.
I-conjunctivitis esakazeka phakathi kwezinja yiyona emele a isifo esifana negciwane. Kulokhu, amandla okuthelelana abaluleke impela, akwazi ukudlulisela kwezinye izinja ngisho nakumuntu.
ICanine conjunctivitis yisifo esingathatha isikhashana ukuselapha Ngokuphelele, kepha ukuhlanganisa ukwelashwa kwezilwane namakhambi asekhaya, uboya bakho ngokuqinisekile buzophinda bubukeke buhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Amakhambi asekhaya okwelapha i-canine conjunctivitis
Ungayelapha kanjani i-gastroenteritis ezinjeni?
Ungazivikela kanjani izimpukane ekulumeni izindlebe zenja yakho